Vaovao - Fampahafantarana ny Master Mode farany an'i ZKONG
Tsy nisy nahita mialoha ny hamafin'ny krizy COVID-19, fa ny orinasan-damaody sasany mahita fa ampy fitaovana kokoa noho ny hafa izy ireo — amin'ny ankapobeny noho ny fahalalany nomerika.
Ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny mpanjifa no laharam-pahamehana indrindra. Amin'izao fotoana izao, ny orinasan-damaody dia efa nikatona fivarotana, fotoana tsy mbola nisy toy izany ny fampidirana sy fananganana fitaovana nomerika toy ny fashiontag ho an'ny fiasana lavitra sy ny fiaraha-miasa amin'ny trano fanatobiana entana, foibe fizarana ary fivarotana ara-batana.
Amin'ny ankapobeny, ny marika vidin'ny elektronika / fashiontag dia mety hanomezana fanampiana an'ireo orinasan-damaody amin'ny hevi-dehibe efatra: fampisehoana vidin-javatra mavitrika, serivisy ho an'ny mpanjifa fanampiny, traikefa omnichannel, fanatsarana ny fizotrany.
Betsaka ny fandalinana tranga ho an'ny ESL / fashiontag an'ny ZKONG nifantoka tamin'ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny zavatra niainany.
Miaraka amin'ny famolavolana ZKONG farany lamaody, fampisehoana taratasy elektronika ary fahazoana bateria 5 taona, ary koa ny vidiny sy ny vokatra tantanan'ny ZKONG Cloud System na aiza na aiza amin'ny fotoana rehetra.
Ny sandan'ny ZKONG fashiontag amin'ny lamaody:
Ampifanaraho amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet ny fampahalalana momba ny zavatra omnichannel
Tsy misy lahasa tanana sy lafo amin'ny fanoloana ny marika taratasy, fitsitsiana fotoana bebe kokoa ny mpiasa
Amboary mora ny vidiny amin'ny fampiroboroboana amin'ny vanim-potoana / toetrandro
Ho an'ny fampielezan-kevitra matetika kokoa
Ny vokatra dia manolotra fitantanana tahiry, ary fiasa manohitra ny halatra
Ny mety hanaovana scanner QR-kaody dia manafatra ilay entana amin'ny tranokala
Volavola namboarina mifanaraka amin'ny fomban'ny marikao